Cuntadda Habeenkii Waqtiyadda Dambe La Cuno Oo Laga Digay.
Saturday November 24, 2018 - 01:18:27 in Wararka by Halgan News
Daraasad ay sameeyeen khubarro caafimaad oo u dhashay dalka Maraykanka ayaa natiijadeeda laga digay cuntadda habeenkii xiliyadda dambe la cuno laguna seexdo
, waxaanay khubarradani caafimaad in muddo ah wadeen daraasaddan oo ay ku baadhayeen saamaynta ay cuntaddaasi ku keento wadnaha iyo caafimaadka guud ahaanba.
Khubarraddan oo ka socotay ururka American Heart Association ayaa sheegay in cuntadaasi la cuno habeenkii xiliyadda dambe ay dhibaato ku keento caafimaadka qofka, gaar ahaana Wadnaha, Beerka iyo Macaan ku dhaca qofka.
Warbixinta daraasadan oo ay ku daabaceen shabakadda LiveScience oo uu qormadan kazoo xigtay wargeyska Dawan ayay khubarradani ku sheegeen in cuntadaasi ay sidoo kale keento qofka oo six ad dhaaf ah u naaxa iyo dhiigiisa oo habkii caadiga ahaa ee uu u shaqaynaayey una soconaayey hab aan ahayn u socda.
Intii daraasadani socotay waxa ay khubarradani baadhitaano ku sameeyeen dad gaadhaaya ilaa 12.7 kun oo qof , kuwaas oo kazoo jeeda Laatin Amerika, waxaanay dadkan da’doodu ahayd 18 sanno jir ilaa 76 sanno jir.
Waxa ay Saynisyahanadan caafimaadku sheegeen in ay ogaadeen sidoo kale in dadka cuntadda cuna wixii ka dambeeya 6-da habeenimo ay dhiigooda ku badato Sonkortu, sidoo kalena uu jidhkoodu soo daayo Insulin badan, sidoo kalena uu kor u kaco cadaadiskooda dhiigu, ayna ka duwan yihin dadka cuntadda cuna ka hor 6:00-da habeennimo.
Waxa ayna intaasi ku dareen in dadka Cuntadda cuna xiliyadda dambe habeenkii ay khatar ugu jiraan in uu ku dhaco xanuunka macaanku 19% , sidoo kalena uu dhiig kar yeesho 23% marka loo eego dadka xiliyadda hore cuntadda cuna.
Nuur Makarem oo ah khabiir caafimaad ,sidoo kalena Dhakhtar ah ayaa sheegay in ay keento cuntadda xiliga dambe la cunaa khal khal bayoolaji ahaaneed oo qofka kudhaca, kaas oo dhibaato u keena jidhka qofka iyo habka shaqo ee gudaha jidhka ka socda, sidoo kalena khubarro kala duwan ayaa hore uga digay cuntadda la cunto inta aan la tegin sariirta ee aan la seexan ka hor, iyaga oo sheegay in ay culays saa’id ah keento, sidoo kalena xanuuno kala duwan oo khatar ahi ay ku dhici karaan qofka, gaar ahaana Kansarka oo si fudud qofka ugu dhici kara.